China Carton Inoyerera Rack Kugadzira uye Fekitori | Huade
Katoni Kuyerera Rack inowanzo gadzirirwa yemuchina chishandiso chengetedzo neyakagadzira uye kurongeka kunhonga maitiro ne logistics nzvimbo. Iine zvikamu zviviri: dhizaini dhizaini uye ine simba kuyerera njanji. Rwizi rwekuyerera rwunoiswa padanho rakagadzirwa. Kubvumidza mudziyo kuti uiswe kumucheto wekumusoro weiyo rack uye uchitsvedza kusvika kumagumo ekudzikisa .Rollers regai mudziyo ufambe mushe negiravhiti .kamwe mudziyo wabviswa kubva kunodzikisa kumagumo, iyo inotevera-inouya kuuya mudziyo inotsvedza kumberi otomatiki .Iine zvikamu zvishanu: RHS Beam ine angled (yekumberi uye yekumashure danda rine angles), RHS Beam (Middle danda isina angles), Kupatsanura ndiro, Side ndiro, Roller (kwakakurudzira) . Iyo yakajairika yekurerekera kona ndeye 3-4 °, Zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa, Inogona kukamurwa kuita danda mhando uye furemu mhando.
Roller yakabatana zvakananga kumberi nekumashure matanda uye yepakati inotsigira danda, uye danda rakaturikwa zvakananga pane yakatwasuka. Iyo yekumisikidza yekuregedza kweMvura Rack kunoenderana nesaizi, huremu hwekatoni uye nekudzika kweMvura Rack, kazhinji 5% - 9%. Iko kutakura kugona kweiyo roller ndeye 6kg / chidimbu. Kana zvinhu zvikaremerwa, zvidimbu zvine 3-4 zvinogona kuiswa mune imwe njanji. Kazhinji, danda rimwe rinotsigira rinoiswa yega yega 0.6m munzira yekudzika kuti iwedzere kuomarara kweanotenderera. Kana njanji yacho yareba, iyo njanji inogona kupatsanurwa nekukamura ndiro. Mabhureki anofanirwa kuiswa pamucheto wekutora kuti unonoke zvinhu uye kudzikisira kukanganisa.
Katoni Kuyerera Rack inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira, kutengesa, nzvimbo yekuparadzira, musangano wemusangano uye imba yekuchengetera ine yakanyanya kuendesa frequency. Inotora njanji dzakakosheswa uye aluminium alloy njanji, inoziva FIFO nekushandisa yega uremu hwezvinhu, uye inokodzera mativi ese egungano mutsara uye nzvimbo yekuparadzira.
Zita Rekushandisa Huade
Type Katoni Kuyerera Rack
Mashoko Q235 simbi
Chitupa CE, ISO9001: 2015
Surface kurapwa Upfu bemhapemha kana kwakakurudzira
Hole saizi yakatwasuka Diamond hole
HS kodhi 7308900000
Kavha Zvese zviri zviviri kusimudzira uye matanda akarongedzwa mukati akasungwa akasungwa nemabhandi esimbi. ne PE firimu Akafukidza zvese, Mapepa makatoni ezve accessories.
Chiteshi Nanjing kana Shanghai (Nanjing inokurudzirwa nekuda kwehupfumi chikonzero)
Pashure: Cantilever Rack
Zvadaro: Tyaira MuRack